सहमति के हो? – Help Center
सहमति भनेको तपाई र अन्य व्यक्तिहरु बीचको सम्झौता हो तपाई सँगै के गर्न चाहानुहुन्छ। हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा सहमति अभ्यास गर्न सक्दछौं, चाहे हामी नयाँ सहकर्मीलाई सोधिरहेछौं कि तिनीहरू अंगालो हालेको छ कि छैन वा हामी कसैलाई हामीले ग्रिन्डरमा भेट्यौं भने के हामी यौन सम्बन्धमा सहजै छौं।
जब यो यौन सम्बन्धको कुरा आउँदछ, सहमति सुनिश्चित गर्दछ कि सबैलाई हानि नपरोस् जुन तिनीहरूले चाहन्छन्। सहमति सबै खुला संचारको बारेमा हो, र यो दुई तरिकाहरूमा हुन्छ: सहमति प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने।
सहमति प्राप्त गर्नु भनेको स्पष्ट, उत्साहजनक पुष्टि हुनु हो जुन तपाईंको पार्टनरले सुरक्षित महसुस गर्छ, निश्चित छ, र आफैंमा रमाईलो गरिरहेको छ। यो धेरै तरिकामा प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्रश्नहरू सोध्नु सहित ("के म तपाईंको शर्ट खोल्न सक्छु ...") र सुझावहरू ("म तिमीलाई चुम्बन गर्न चाहन्छु, ठीक छ?")। तपाईंको पार्टनरको साथ जाँच गर्दै र उनीहरूको स्वीकृति प्राप्त गर्दा यो निश्चित हुन्छ कि तपाईं एकअर्काको सीमाहरू जान्नुहुन्छ र सम्मान गर्नुहुन्छ।
सहमति प्रदान गर्नु भनेको तपाईको साथीलाई थाहा दिनु हो कि तपाई आफैले रमाईलो गरिरहनु भएको छ र के हुँदैछ सबैकुरा ठीक छ। तपाइँ मौखिक पुष्टिसँग "हो" जस्तो र साथसाथै गैर-मौखिक संकेतहरूमार्फत सहमति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ जसले खुशीलाई संकेत गर्दछ र तपाइँको पार्टनरलाई थाहा दिन्छ कि तपाइँ एक राम्रो अनुभव पाउँदै हुनुहुन्छ।
यो सम्झन महत्वपूर्ण छ कि सहमति सधैं उल्टो हुन्छ। के तपाईंले कहिल्यै ग्राइन्डरमा कसैलाई केहि भन्नुभएको छ र व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा फरक महसुस गर्नुभयो? तपाइँ कुनै पनि समयमा के गर्न चाहानुहुन्छ भनेर तपाइँको बिचार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। केवल किनभने तपाईंले ग्रिन्डरमा केहि सहमति दिएका हुन सक्नुहुन्छ यसको मतलब यो होइन कि तपाईं जब त्यो भेट्नु हुन्छ त्यो गर्न बाध्य छन्। दिनको अन्त्यमा, तपाईं र तपाईंको पार्टनरहरू आदर र सम्मान पाउन योग्य जुन तपाईं सँगै गरिरहनु भएको छ।
सहमति बारे थप जान्नको लागि योजना गरिएको अभिभावकबाट यस भिडियोलाई हेर्नुहोस्। किशोर भोगबाट आएको यस सूचीमा कसरी संचार गर्ने बारे उदाहरणहरू छन् जब यो सहमतिमा आउँदछ। (अंग्रेजीमा जानकारीको लागि लिंक)